Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiadidiana ny Repoblika: Tsy mahagaga raha tsy mahomby ny asa
Fiadidiana ny Repoblika: Tsy mahagaga raha tsy mahomby ny asa
Ny didim-panjakana noraisina teo anivon’ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra notarihin’ny Filohampirenena Rajaonarimampianina ny alakamisy teo no nanendrena an’i Eric Randrasana ho talen’ny kabinetra sivily eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika. Izy izany no talen’ny kabinetra tena tompon-toerana taorian’ny nisaorana an-dRabary Njaka Henry, taona vitsy lasa izay. Teo anelanelan’izay dia tale vonjy maika no nisahana ny fitarihana ny kabinetran’ny fiadidiana ny Repoblika, dia Rtoa Razafindrakoto Herisoa.
Rehefa atao ny fandinihana ankapobeny dia isan’ny porofo manamarina ny naha-filohampirenena tampoka, tsy nisy fiomanana, an-dRajaonarimampianina izao raharahan’ny kabinetrany izao. Aza hadinoina fa mitana anjara toerana goavana eo amin’ny fitantanana ny pôlitika ankapoben’ny firenena ny andraikitra ny talen’ny kabinetra sivilin’ny fiadidiana ny Repoblika nefa an-taonany no tsy nisy fa vonjy maika no tao. Tsy mahagaga raha tsy nahitam-pahombiazana izany fitantanan-draharaham-panjakana izany.
Efa ambolana sisa tsy higadona ny fifidianana filohampirenena vao nahita olona na tapa-kevitra hanendry tale vaovao hisahana ny kabinetrany Ingahy filohampirenena. Tena tsy matihanina ary tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy mihitsy izany.
Raha filohampirenena nanana rafitra pôlitika matotra ny filoha Rajaonarimampianina dia ho nanana talen’ny kabinetra raikitra hatrany, ka raha vao nesorina i Henry Rabary Njaka dia ho nisy avy hatrany ny nasolo azy, tompon-toerana fa tsy vonjy maika.
Raha zohiana mantsy dia ny fisahanana vonjy maika ny andraikitra ny talen’ny kabinetra teo ambany fisahanan-dRazafindrakoto Herisoa aza no naharitra raha miohatra amin’izay niadidian-dRabary Njaka an’io toerana io sy izay hiantsorohan-dRandrasana Eric azy nanomboka omaly hatramin’ny fahavitan’ny fifidianana.
Dia iarahantsika mahita amin’izany ny tsy maha-lojika ny raharaha, ka tsy mahagaga raha tsy nandeha ny fitantanana ankapobeny ny firenena.
Tsy ny fisahanana ny kabinetran’ny filohampirenena ihany akory no antony tsy nampandeha ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy raharaham-pirenena fa taratra ny tsy fahaiza-mitantana eo amin’ny raharaha ankapobeny io tranga nisy teo anivon’ny kabinetran’ny filohampirenena io.
Dia hisy hanan-kevitra hafa mifanohitra amin’izany lalan-tsaina izany indray ve ka ho sahy hanamarina fa mandeha ny raharaha na nisy tale tompon-toerana nisahana ny kabinetra sivilin’ny filohampirenena tao na tsia fa vonjy maika hatrany?
Christine Razanamahasoa: «Misy fitanilanana ny fomba fiasan’ny BNGRC »
Nampitondra takaitra tamina faritra maro ny rivo-doza Ava izay nandalo teto amintsika, ny herinandro lasa teo. Na dia iny tapany atsinanan’ny Nosy iny aza no heverina fa tena voa mafy, dia saika voakasika ary nitondra takaitra avokoa ny distrika aty afovoan-tany, isan’izany distrikan’Ambatofinandrahana, Faritra Amoron’i Mania. Raha ny filazan’ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana, Christine Razanamahasoa, dia trano manodidina ny 50 isa no rava tao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Ava, ary aman’arivony kosa ireo olona tra-boina noho ny fiakaran’ny rano. Ny zava-misy anefa ankehitriny dia tsy misy mpijery mihitsy ireo tra-boina any Ambatofinandrahana ary tsy mba hitan’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny BNGRC, raha ny nambaran’ny depiote Christine Razanamahasoa. Ity farany izay nilaza fa misy fitanilanana ny fomba fiasan’ny BNGRC satria misy ny faritra sasany no tongan’izy ireo tsara ary voakarakara tsara ny tra-boina. Maro kosa anefa ireo faritra no tsy ahitana izany BNGRC izany mihitsy. Ho an’Ambatofinadrahana manokana izao dia ny depiote voafidy tany an-toerana sy ireo tsara sitrapo no miezaka manampy ireo tra-boina kanefa voafetra ihany ny fanampiana entin’izy ireo noho ny tsy fahampian’ny nenti-manana.